Maitiro ekuisa Android 12 dhizaini pafoni yako ▷ ➡️ Android Pop ▷ ➡️
Hazvina kumbobvira zvave nekugadzirwa kweiyo Android 12 sisitimu yekushandisa yakaitwa shanduko dzakawanda kudaro. Vazhinji vashandisi vakatozvitenda muPixel 6 itsva yakavhurwa svondo rapfuura. Zvino ndiudze: nei tichida Android nharembozha? Ndizvozvo, mukana wekusingaperi kugadzirisa. Munguva pfupi yapfuura, imwe yeanonyanya kufarirwa liner yakagamuchira yakakura update inodzokorora akawanda eiyo Android maficha 12 uye inoshanda pane yakawanda yemidziyo.
Vagadziri veiyo yakakurumbira yekuvhura Lawnchair vachangobva kuburitsa yechipiri vhezheni yavo yealpha yekuyedza app, inochinjika ku Android 12 mune zvese zvese. Nayo, vanenge vese vashandisi vanogona kuyedza ese maficha eiyo nyowani yekushandisa system.
Android 12 chimiro
Isu takatokuudza kanopfuura kamwechete nezve dhizaini nyowani yeApple 12, zviite. Asi kana iwe uri nungo yekuverenga, ini ndichaedza kukupa nhau huru:
Iyo yese sisitimu (kusanganisira yemuno maapplication) yakagadziridzwa zvizere kune yako Wallpaper.
Paunoshandura iyo Wallpaper, iyo sisitimu inozotora otomatiki iyo inotonga uye inowirirana mavara kubva kumadziro uye isa mavara aya kumabhatani, masiraidhi, uye zvimwe zvinhu pahurongwa.
Wachi hombe ichaonekwa pakati pekiyi yekukiya.
Kune majeti matsva ane dials uye masocial network.
Animations dzakanyatsogadziridzwa kuti zvive nyore kushanda.
Madingindira akawedzerwa zvichienderana nemwaka yegore.
Ndinofunga kuti munhu wose akanzwa nezvazvo Material Iwe. Pfungwa yekutanga kuseri kweiyi pfungwa yakasarudzika maitiro eiyo yese nharembozha system, iyo ichave yakagadzirirwa kune wega wega mushandisi. Semuenzaniso, kana iwe ukaisa yako wega Wallpaper padesktop, zvachose zvese zviri pafoni yako zvinoenderana nemufananidzo iwoyo uye kurodha pendi yeruvara iwe chete.
Zviri pachena kuti sisitimu yekushandisa haingori nezve dhizaini uye zvakasiyana "zvakanaka zvinhu", zvinonyanya nezve mashandiro, nezve chiitiko chitsva chemushandisi. Isu takambotaura nezve maficha makuru eApple 12 zvisati zvaitika, asi sezvo pachine nguva yakareba yekumirira, ndinokurudzira kuti uedze nhau izvozvi.
Maitiro ekuisa Android 12
Chikwata cheLawnchair app chasvika kure. Vakafunga kuvhura chigadzirwa chisina kungotevedzera dhizaini yeimba uye maapplication, asi zvakare yakagadziridza maapplication kuruvara rwenharembozha yako.
Dhawunirodha Lawnchair 12
Iyo app yave kuburitswa mukuyedzwa kwealpha, asi aya maficha ave kuwanikwa mairi:
Rondedzero yeapp, maforodha, mifananidzo uye zvimwe zvese zvine chitarisiko chitsva seye Android 12.
Lawnchair haizove nedambudziko kuburitsa iyo huru ruvara kubva kune yako Wallpaper uye kuibatanidza mune iyo yese interface. Iwo mabhatani nemashure anozoenderanawo neMaterial You.
Pane basa rekuviga maapplication kubva pane yese rondedzero. Kuti uite izvi, ingo dzvanya uye ubate iyo icon.
Flexible customization yemafonti.
Kugadziridza kwekuvhura otomatiki kwekhibhodi kuburikidza nebhari yekushandisa.
Tsvakiridzo yakabatanidzwa mubhara rekushandisa. Dzvanya Enter kukurumidza kuita mutambo wekutanga wawanikwa.
Iyo app ichashanda zvizere nemidziyo yese yeAroid pazasi vhezheni 8.1. Varidzi vezvishandiso zvekare zvinosuruvarisa kuti havazokwanisa kunakidzwa neyakagadziriswa Material You Wallpaper. Haisati yave kuwanikwa paGoogle Play, saka tinokukurudzira kuti uende kuTeregiramu chat yeapp woidhawunirodha kubva ipapo.
Kune rumwe rutivi, tinoda kutaura kukomba kwevagadziri. Vakomana vanogara vachivandudza software yavo uye vanogadzirisa tsikidzi. Nekudaro, kana iwe ukaona chero tsikidzi dzakakomba, ini ndinokuyeuchidza kuti iwe unogona kuyedza yekuvhura inoenderana neyakagadzika Android 11 - iyo application ichaiswa zvakare. Uye kana usiri kufara nazvo, unogona kugara uchiibvisa.
Android 12 ichabuda riini?
Munyori we -, Artem Sutyagin, akatotaura nezve nguva yekutarisira kugadziridzwa kwepamutemo kwechigadzirwa chine ruzivo rwemhando yega yega. Pakupedzisira, hombe Samsung, OnePlus, Xiaomi uye mamwe mabhureki ane mukurumbira anofanirwa kuwana gadziriso pakupera kwa2021.
Zvichakadaro, Lawnchair 12 ndiyo chete nzira yekusangana neGoogle's new operating system pamberi pemumwe munhu.
Iwe unoisa Lawnchair pane chako kifaa? Kana kuti unofarira yekutanga kesi? Uri kuronga kuisa gadheni chair 12? Ini ndinokurudzira kuti usiye maonero ako mune yedu Telegraph chat, zvichave zvinonakidza kuiverenga.